ट्याग: भविष्यवाणी | Martech Zone
बिहीबार, फेब्रुअरी 6, 2014 बिहीबार, फेब्रुअरी 6, 2014 Douglas Karr
प्रत्येक केही दिन, मेरो छोरी र मसँग चार्जिंग कर्ड छ कि भनेर एक बहस मा। म मेरो हड्डी लोभ गर्दछु र उनी आफ्नो कार्टिमा उसको हड्डी छोड्न जान्छिन। यदि हाम्रो फोनहरू दुबै एकल अंक चार्ज प्रतिशतमा छन् भने ... हेर्नुहोस्! हाम्रा फोनहरू हाम्रो व्यक्तिको हिस्सा बनेका छन्। यो हाम्रो संयोजी ऊतक हो हाम्रा साथीहरू, हाम्रो हालको मेमोरी रेकर्डर, हाम्रो मित्र जसले हामीलाई के गर्ने बारे सम्झाउछ।
के यो बर्ष तपाईंको लागि दुखाई छ? यो मेरो लागि गरे। यो गाह्रो वर्ष थियो किनकि मैले मेरो बुबा गुमाएँ, मेरो स्वास्थ्यले पीडित भयो, र व्यापारमा केही डरलाग्दो समस्याहरू थिए - साथै एक महान साथी र सहकर्मीसँग छुट्टिनु पर्छ। तपाईले मेरो ब्ल्ग मार्केटिंग जानकारीका लागि पढ्नुहुन्छ त्यसैले म अन्य मुद्दाहरूमा फोकस गर्न चाहन्न (यद्यपि उनीहरूले ठूलो प्रभाव पारे), म मार्केटिंग र मार्केटि Technology टेक्नोलोजीसँग सिधा कुरा गर्न चाहन्छु। २०१ Marketing मा मार्केटिंग
२०११ को लागि शीर्ष १० टेक्नोलोजीहरूको गार्टनरको भविष्यवाणी पढ्न यो रोचक छ ... र वास्तवमै प्रत्येक एक भविष्यवाणीले डिजिटल मार्केटिंगमा प्रभाव पार्दैछ। स्टोरेज र हार्डवेयरमा भएका प्रगतिहरूले पनि कम्पनीहरूको क्षमतालाई ग्राहक र सम्भावितहरूसँग छिटो र अधिक प्रभावकारी रूपमा अन्तर्क्रिया गर्ने वा साझेदारी गर्ने क्षमतालाई असर गरिरहेको छ। २०११ क्लाउड कम्प्युटि forको लागि शीर्ष दस टेक्नोलोजीहरू - क्लाउड कम्प्युटिंग सेवाहरू खुला सार्वजनिकबाट बन्द निजीमा स्पेक्ट्रमको साथ अवस्थित छन्। अर्को तीन बर्षमा वितरण देख्नेछ
शनिबार, डिसेम्बर 12, 2009 शुक्रबार, जुलाई 27, 2018 Douglas Karr
हामी सामाजिक मिडिया, खोज र हाम्रो इनबक्सबाट सूचनाको साथ अभिभूत छौं। खण्डहरु बढ्दो छ। मेरो ईनबक्समा मार्ग सन्देशहरू र सतर्कताहरू मार्गमा १०० भन्दा कम नियम छैन। मेरो क्यालेन्डर मेरो ब्ल्याकबेरी, आई क्याल, गुगल क्यालेन्डर र टgleगल बिच सिnch्क्रोनाइज हुन्छ। मसँग व्यवसाय कलहरू प्रबन्ध गर्न गुगल भ्वाईस छ, र तपाईं मेरो फोनमा सिधा कलहरू ह्याण्डल गर्न ममेल हुनुहुन्छ। जो हलले आज लेख्यो कि गोपनीयता चिन्ता र Google द्वारा व्यक्तिगत डेटा को उपयोग गर्न सक्छ